အခမဲ့ Crypto Signals Telegram Groups ဇူလိုင်လ 2022 | ကုန်သွယ်မှုလေ့လာပါ။
2022 အခမဲ့အခမဲ့ Crypto Signals ကြေးနန်း
နောက်ဆုံးရေးသားချိန်:6ဇွန်လ 2022
cryptocurrency အရောင်းအ၀ယ်မြင်ကွင်းသည် ယခုအခါ ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာတန်သော တိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် နာမည်ကြီး ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးများ ပါ၀င်သည်သာမက၊ Bitcoin, Ethereumနှင့် Ripple – သို့သော် အရည်နည်းပါးသော cryptocurrencies အစုအဝေးများလည်း ရှိသည်။
သို့သော် - များစွာသောနှင့်တူ အွန်လိုင်းကုန်သွယ် ငွေရှာရန်အတွက် cryptocurrencies ကိုဝယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းဝယ်ခြင်းသည်မလွယ်ကူပါ။ ဆန့်ကျင်တွင်, သင်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၏တစ် ဦး စူပါနက်ရှိုင်းသောနားလည်မှုရှိရန်လိုအပ်သည်။
သတင်းကောင်းမှာ ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးဇယားများ - Telegram crypto အချက်ပြမှုများကို လနှင့်လများ ဖတ်ရှုလေ့လာရန် လိုအပ်သည့် ရွေးချယ်စရာတစ်ခု ရှိပါသည်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင် Learn2Trade ကဲ့သို့သော ထိပ်တန်းအဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အချက်ပြဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုတွင် ပါဝင်ခြင်းဖြင့် - သင်သည် cryptocurrency ကုန်သွယ်မှုအကြံပြုချက်များကို တိုက်ရိုက်လက်ခံရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ကွေးနနျးစာ app ကို။
Telegram crypto အချက်အလက်များသည်သင့်အားဤဆန်းသစ်သောကုန်သွယ်မှုနယ်ပယ်တွင်ရှေ့သို့ဆက်လက်ရပ်တည်ရန်မည်ကဲ့သို့ခွင့်ပြုနိုင်သည်ကိုပိုမိုရှာဖွေရန်စိတ်ကူး? သို့ဆိုလျှင်ဤလမ်းညွှန်သည်သင်လေ့လာရန်လိုအပ်သည့်2Trade Telegram cryptocurrency အချက်ပြဝန်ဆောင်မှုနှင့် ပါတ်သက်၍ သင်သိရမည့်အရာအားလုံးကိုရှင်းပြလိမ့်မည်။
Telegram Crypto Signals ဆိုတာဘာလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် nitty-gritty သို့မရောက်မီကျွန်ုပ်တို့သည်ပထမ ဦး ဆုံး cryptocurrency အချက်ပြမှုများသည်မည်သည့်အချက်များဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်း၏အခြေခံအကျဆုံးပုံစံတွင်အချက်ပြများသည်အရောင်းအ ၀ ယ်များဖြစ်ပြီး၊
၎င်းသည် SMS မက်ဆေ့ခ်ျ၊ အီးမေးလ် (သို့) Telegram ကဲ့သို့သောလက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေးအက်ပ်မှတဆင့်လာနိုင်သည်။ အချက်ပြချက်တွင်သင့်အားကျွမ်းကျင်သူကုန်သည်တစ် ဦး ၏သုတေသနမှအမြတ်ထုတ်ရန်ညွှန်ကြားချက်များစွာပါရှိသည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ signal သည် BTC / USD ကိုဒေါ်လာ ၁၄၅၀၀ ဖြင့် ၀ ယ်ရန်သင့်အားပြောကောင်းပြောလိမ့်မည်။
အလားတူစွာအချက်ပြမှုတစ်ခုကသင့်အား ETH / EUR ကိုတိုတောင်းရန်ပြောကောင်းပြောလိမ့်မည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်အဓိကထောက်ပံ့သောလိုင်းမှာပြတ်တောက်သွားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
pair တစုံနှင့် ၀ င်ငွေစျေးနှုန်းအပြင်အကောင်းဆုံး Telegram cryptocurrency အချက်ပြမှုများသည်မည်သည့် stop-loss နှင့် setup လုပ်ရန်အမြတ်အစွန်းများကိုပေးသည်ကိုပြောပြလိမ့်မည်။ ရိုးရိုးလေးပြောရမယ်ဆိုရင်၊ ဒီဟာက cryptocurrencies ကိုတစ်ချိန်တည်းမှာပဲသင့်ရဲ့အန္တရာယ်တွေကိုလျှော့ချနိုင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်။
Telegram Crypto Signals များသည်မည်သူတို့နည်း။
Telegram crypto အချက်အလက်များသည်အမျိုးမျိုးသောဘဏ္goalsာရေးပန်းတိုင်များနှင့်အတွေ့အကြုံဆိုင်ရာ profiles များအတွက်သင့်လျော်သည်။ တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်သင်ဟာ cryptocurrency အရောင်းအဝယ်လေ့လာသူတစ် ဦး ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သင့်လက်ထဲမှာအချိန်သိပ်မကျန်တော့တဲ့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အချက်အလက်များသည်သင်ရှာဖွေနေတဲ့အဖြေဖြစ်နိုင်သည်။
Telegram crypto အချက်ပြမှုသည်အတွေ့အကြုံမရှိဘဲတက်တက်ကြွကြွကူးသန်းရောင်းဝယ်မှုကိုများစွာအထောက်အကူပြုသည်မှာသေချာသည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်ဟာသုတေသနတစ်ခုသို့မဟုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုများကိုလုပ်ဆောင်ရန်မလိုအပ်လို့ပဲ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် Telegram cryptocurrency signal service သည်သင်ရွေးချယ်ထားသောပွဲစားတွင်သင်ထားရန်လိုအပ်သော ၀ င်ထွက်ပေါက်နှင့်ထွက်ပေါက်စျေးနှုန်းအားလုံးကိုသင့်အားပေးလိမ့်မည်။
၎င်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်၊ ရေတိုကာလတွင် cryptocurrency စျေးနှုန်းမည်မျှသွားနိုင်သည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ခက်ခဲခြင်းသည် crack ရန်ခက်ခဲသော cookie ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်နည်းပညာဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ ပုံဆွဲကိရိယာများနှင့်စျေးကွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်းတို့ကိုလေ့လာခြင်းသည်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်လေ့လာသူ cryptocurrency ကုန်သည်တော်တော်များများဟာမကြာခဏကျဆုံးသွားတာမျိုးမရှိပါဘူး။
Crypto Trends ကိုတက်ကြွစွာသုတေသနပြုရန်သင့်တွင်အချိန်မရှိပါ
အထက်ဖော်ပြပါကဏ္fromမှ ဦး ဆောင်။ တက်ကြွစွာကုန်သွယ်ရန်အချိန်မရှိသောသူများအတွက် Telegram crypto အချက်ပြများသည်လည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သေချာတာပေါ့၊ သင်အချက်ပြမှုပြုရန်ညွှန်ကြားထားသောသက်ဆိုင်ရာ ၀ ယ်ရန်နှင့်ရောင်းရန်အမှာစာများထားရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ သို့သော် crypto trading မြင်ကွင်းတွင်အောင်မြင်ရန်လိုအပ်သောနေ့စဉ်သုတေသနနာရီများကိုသင်ဖြတ်တောက်နိုင်လိမ့်မည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သုတေသနနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုလုပ်ငန်းကိုသင်ရွေးချယ်ထားသော Telegram crypto signal provider ကဂရုစိုက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်လေ့လာခြင်း (၂) ကုန်သွယ်ရေးတွင်အတွေ့အကြုံရှိသောအိမ်တွင်းကုန်သည်များအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိသည်။ ၎င်းတို့သည်တစ်ပတ်တာအတွင်းနက်ရှိုင်းသောနည်းပညာဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုများကိုလုပ်ဆောင်ကြသည်။ ကုန်သွယ်ရေးအခွင့်အလမ်းကိုရှာတွေ့သည်နှင့်အဖွဲ့ ၀ င်တစ် ဦး သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အချက်ပြအဖွဲ့ဝင်များကို Telegram app မှတစ်ဆင့်မွမ်းမံလိမ့်မည်။
သင်ဟာ တသမတ်တည်း အမြတ်အစွန်းတွေ ရအောင် လုပ်ရာမှာ ကောင်းမွန်တဲ့ ခြေရာခံ မှတ်တမ်း ရှိတဲ့ ကျွမ်းကျင်သူ ကုန်သည် တစ်ဦး ဖြစ်တယ် ဆိုပါစို့။ ဤသို့ဆိုလျှင် သင်အာရုံစိုက်နိုင်သော ငွေကြေးဆိုင်ရာ ပိုင်ဆိုင်မှုများစွာသာ ရှိသည်ကို သင်ကိုယ်တိုင် သိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်ရွေးချယ်ထားသော cryptocurrency အတွဲများ၏ အဝင်အထွက်များကို သင်သိနိုင်သော်လည်း - ၎င်းတို့အားလုံးတွင် ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်လာနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။
ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ Telegram crypto အချက်အလက်များသည်သင့်အားမတူညီသောစျေးကွက်အမျိုးမျိုးသို့ပြောင်းလဲရန်ခွင့်ပြုသည်။ တစ်ဖန် ထပ်မံ၍ ဖြစ်သည်၊ သုတေသနခရီးသည်သင်စိတ်ပူစရာမလိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အဲဒီအစား၊ သင်ရွေးချယ်ထားသောအချက်ပြပေးသူသည်ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်ဘဏ္instrumentsာရေးတူရိယာများအားစကင်ဖတ်စစ်ဆေးရန်ကျွမ်းကျင်မှု၊ အတွေ့အကြုံနှင့်နည်းပညာအကူအညီများရရှိလိမ့်မည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ Learn2Trade သည် cryptocurrencies တွင် အထူးကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်သည့် အိမ်တွင်းကုန်သည်များကို အတွေ့အကြုံရှိရုံသာမကဘဲ အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများလည်းရှိသည်။ ၎င်းတွင် Forex၊ စတော့များ၊ ညွှန်းကိန်းနှင့်ပင် ကုန်စည် ကဲ့သို့ ရှေ နှင့် ဆီ.
Cryptocurrency Trading Community သို့ဆက်သွယ်လိုသည်
ပြည့်ပြည့်စုံစုံ crypto trading အသိုင်းအဝိုင်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုလျှော့မတွက်သင့်ပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်ဟာတူညီတဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုရောက်ချင်တဲ့စိတ်တူစိတ်ရှိတဲ့သူတွေကိုရနိုင်မှာပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာ cryptocurrency စျေးကွက်ကနေငွေရှာဖို့ပါပဲ။
Learn2Trade ကဲ့သို့သော Telegram crypto signal service ကိုအသုံးပြုပါကသင်သည်အသင်းဝင် ၅၀၀၀ နီးပါးကိုရရှိလိမ့်မည်။ အချို့သည်အတွေ့အကြုံမရှိ (သင်နှင့်တူသည်) ဖြစ်မည်ဖြစ်သော်လည်းအခြားသူများသည်ထိုနေရာ၌နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိလိမ့်မည်။ ၎င်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်တွင်းကုန်သည်များအဖွဲ့ပါ ၀ င်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ crypto ကုန်သွယ်မှုအသိုင်းအဝိုင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်သင်သည်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ချင်းများထံမှစျေးကွက်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုစုပ်ယူနိုင်သည်၊ မေးခွန်းများမေးနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်ထိုင်ကာနောက်လာမည့်အချက်ပြမှုကိုစောင့်ဆိုင်းနိုင်သည်။
Telegram Crypto Signals တွေကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။
ဒါကြောင့်ယခု Telegram crypto အချက်အလက်များသည်မည်သူသင့်တော်မည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရှင်းပြပြီးပြီ ဖြစ်၍ ယခုကုန်သွယ်ရေးမြင်ကွင်း၏ဤactuallyရိယာအမှန်တကယ်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုအနည်းငယ်နက်ရှိုင်းစွာလေ့လာရန်လိုအပ်သည်။
ပြီးနောက်၊ အချက်ပြချက်တခုခုလုပ်ဆောင်တဲ့အခါသင့်ကိုယ်ပိုင်ကုန်သွယ်ရေးအရင်းအနှီးကိုသင်စွန့်စားရတော့မယ်၊ ဒါကြောင့်မကျရောက်ခင်အခြေအနေတွေဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့အရေးကြီးတယ်။
Learn2Trade မှအချက်ပြမှုကိုလက်ခံရရှိသောအခါသင်လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သမျှကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည် Cryptocurrency အတွဲနှင့် entry price တို့ဖြင့်သင့်အားသက်သေပြရုံမျှသာဖြစ်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်, သင်လိုအပ်သောပစ်မှတ်ထွက်ပေါက်စျေးနှုန်းနှင့်ရပ်တန့် - ဆုံးရှုံးမှုအဆင့်ကိုပေးလိမ့်မည်။
ဤတွင် Learn2Trade Telegram crypto အချက်ပြပုံသည်ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။
pair ကို: XRP/USD
အမြတ်အစွန်း - $0.2689
အကြံပြုအန္တရာယ် - 1% ။
အထက်ပါမှသင်မြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့၏ Telegram crypto အချက်အလက်များမှသင်အမြဲတမ်းရရှိမည့်အချက်အလက်ခြောက်ခုရှိသည်။ ဤအချက်၏ရှေ့ပိုင်းတွင်သင်ကုန်သွယ်သင့်သည်၊ ဝယ်ရန်သို့မဟုတ်ရောင်းရန်အမှာကိုရွေးချယ်သင့်သည်စသည်တို့သည် cryptocurrency pair ဖြစ်သည်။
နှင့်သင်တန်း၏ - ဒီမှာလည်းလိုအပ်သော entry ကိုစျေးနှုန်းပါဝင်သည်။ ဤကိစ္စတွင်၎င်းသည် ၀.၂၈၉ ဒေါ်လာဖြင့် XRP / USD ဖြင့် ၀ ယ်ရန်ကန့်သတ်ချက်အမိန့်ဖြစ်သည်။ အာကာသအတွင်းရှိ crypto signal ပေးသူများစွာနှင့်သင်ရှာတွေ့နိုင်သည့်အရာမှာ၎င်းသည်သင်ရရှိလိမ့်မည်။ တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်သင်ဟာကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာအကြံပေးချက်နဲ့အကြံဥာဏ်ကောင်းတွေရှိနေချိန်မှာသင့်ရဲ့ထွက်ပေါက်မဟာဗျူဟာကိုရေးဖို့လိုတယ်။
Telegram crypto signal ၀ န်ဆောင်မှု၏ပုံသဏ္againstာန်နှင့်မကိုက်ညီပါ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် stop-loss နှင့်အမြတ်ရရှိသောစျေးနှုန်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏အကြံပြုချက်များအားလုံးနှင့်အတူထောက်ပံ့ပေးသည်။
အပေါ်ကဥပမာကနေသင်မြင်နိုင်တဲ့အတိုင်း၊ ရပ်တန့်ပြီးအရှုံးဒေါ်လာ ၂၂၉၇၀ ပေးတယ်။
အကယ်၍ ကုန်သွယ်မှုသည်နောက်ပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆန့်ကျင်ပြီး XRP / USD သည်ဒေါ်လာ ၀.၂၉၇ ထိရောက်ပါကရာထူးကိုအလိုအလျောက်ပိတ်လိမ့်မည်။
ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀.၂၆၈၉ ဒေါ်လာဖြင့်အမြတ်အစွန်းရသောစျေးနှုန်းကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သော stop-loss order နှင့်ဆင်တူသည်မှာဤစျေးနှုန်းကိုစျေးကွက်သို့ရောက်ရှိပါကကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်သွယ်မှုကိုအလိုအလျောက်ပိတ်လိမ့်မည်။
ဤအချိန်သာကျွန်ုပ်တို့၏ပစ်မှတ်အမြတ်စျေးနှုန်းမှာ။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုမကြာမီထုတ်ဖော်ပြသသောအခါ၊ Telegram crypto အချက်အလက်များသည်အမြဲတမ်းအန္တရာယ်နှင့်အကျိုးအမြတ်အချိုးအစားရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အမြတ် ၄% ရရှိရန် ၁% သို့မဟုတ် ၅% အမြတ်ရရှိရန် ၂% အန္တာရာယ်ရှိသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ၎င်းသည်သက်ဆိုင်ရာ Telegram crypto အချက်ပြမှုဖြင့်ရပ်တန့်ပြီးဆုံးရှုံးမှုနှင့်အမြတ်အစွန်းရရှိမှုအဆင့်များကိုထင်ဟပ်လိမ့်မည်။
ကျွန်တော်တို့ဘယ်လို Cryptocurrency Market ကသာလွန်
ငါတို့ဘယ်လိုနေလဲလို့သင်စဉ်းစားမိနိုင်တယ် တကယ်တော့ ကျွန်ုပ်တို့၏ Telegram crypto အချက်ပြမှုကိုရယူပါ။ နောက်ဆုံးမှာတော့အားလုံးဟာကောင်းပါတယ်။ ကုန်သွယ်ရေးအကြံပြုချက်တွေပါပါတယ်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည် Learn2Trade ၌သမိုင်းကြောင်းအရ ၇၆% အနိုင်ရရှိမှုအချိုးအစားကိုခုခံကာကွယ်ခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာအချိန်ကုန်လွန်သွားသောအခါဆုံးရှုံးမှုများထက်ရောင်းဝယ်မှုပိုမိုရရှိသည်။
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင် ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်တွင်းကုန်သည်များအဖွဲ့မှ ကျွန်ုပ်တို့၏ Telegram crypto အချက်ပြမှုများကို နက်ရှိုင်းစွာသုတေသနပြုပြီးနောက် ထုတ်ပေးပါသည်။ ဤအမြောက်အမြားကို နည်းပညာပိုင်းခြားစိတ်ဖြာမှုဖြင့် လွှမ်းမိုးထားသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည် အခြေခံအချက်များအပေါ်တွင် အမှတ်အသားပြုထားသည်။
အစောပိုင်းတွင် ဆွေးနွေးခဲ့သည့်အတိုင်း နည်းပညာဆိုင်ရာ သုတေသနခရီးသည် ကျွမ်းကျင်ရန် လွယ်ကူသော စွမ်းဆောင်ချက်မဟုတ်ပေ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ အတွေ့အကြုံရှိသော ကုန်သည်များသည် ကုန်သွယ်မှုနေ့တစ်လျှောက် ဒါဇင်များစွာသော နည်းပညာဆိုင်ရာ အညွှန်းကိန်းများကို အသုံးပြုပါမည်။ ၎င်းတို့သည် crypto စျေးကွက်များ၏လက်ရှိအခြေအနေကိုအမြဲတမ်းအပြည့်အဝကြည့်ရှုနိုင်စေရန်သေချာစေရန်အတွက် multi-screen များကိုအသုံးပြုသည်။
ထို့အပြင်၎င်းသည်ခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုရှာဖွေခြင်းမျှသာမဟုတ်ပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုန်သည်များအသင်းကအကောင်းဆုံးဝင်ပေါက်နဲ့ထွက်ပေါက်စျေးနှုန်းကိုအကောင်းဆုံးကြိုးစားရှာဖွေနိုင်လို့ပဲ။ နောက်ဆုံးတွင်၎င်းသည် crypto signal ကိုစီစဉ်ရန်မသွားပါကကျွန်ုပ်တို့၏ဆုံးရှုံးမှုများကိုကန့်သတ်ရန်သေချာစေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အချက်ပြမှုအားလုံးသည်အမြတ်ပြန်ရလိမ့်မည်မဟုတ်သောကြောင့်၎င်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ကွဲပြားခြားနားစွာသင့်အားပြောသည့်ပံ့ပိုးသူသည်ရိုးသားခြင်းမဟုတ်ပါ။
Telegram ကိုဘာကြောင့် Crypto Signals အတွက်အသုံးပြုတာလဲ။
အရောင်းအဝယ်အချက်ပြမှုသည်ဆယ်စုနှစ်များစွာရှိခဲ့ပြီ - အွန်လိုင်းအကျိုးဆောင်ပလက်ဖောင်းများမတိုင်မီကြာမြင့်စွာကပင်။ အဲဒီအချိန်တုန်းကအချက်ပြတွေကိုတယ်လီဖုန်းခေါ်တယ်။ သင်စဉ်းစားကြည့်နိုင်သည့်အတိုင်း၊ ထို့နောက် signal provider များသည်တစ်ချိန်က email သို့ကူးပြောင်းခြင်းကိုပြုလုပ်ခဲ့သည် အွန်လိုင်းကုန်သွယ် အရာဖြစ်လာခဲ့သည်။
ဒီဟာကို crypto signal platforms တွေအများကြီးကယနေ့ထိအသုံးပြုနေတုန်းပဲ။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, သင်အီးမေးလ်ကိုအချက်ပြအပေါ်ပြုမူရန်အချိန်မီမမြင်နိုင်ခြင်းနှင့်ထို့ကြောင့် - အခွင့်အလမ်းကိုလက်လွတ်ဖို့အခွင့်အလမ်းတိုင်းရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် Learn2Trade crypto ဝန်ဆောင်မှုသည် Telegram ကိုအသုံးပြုသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်တွင်းကုန်သည်တစ် ဦး သည်အချက်ပြမှုတစ်ခုပေးပို့ပြီးသည်နှင့်သင်၏ Telegram app သို့အကြောင်းကြားစာပေးပို့လိမ့်မည်။ အသံသတိပေးချက်များဖွင့်ထား သ၍ သင်သည်အချက်ပြမှုကိုဘယ်တော့မျှမလွတ်နိုင်ပါ။ ထို့အပြင် Telegram သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အချက်ပြမှုနှင့်ပိုမိုထိတွေ့စေရန်ခွင့်ပြုသည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အဖွဲ့ဝင်များသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ တွေးခေါ်မှုဖြစ်စဉ်ကို ကြည့်ရှုနိုင်စေရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု တွေ့ရှိချက်များ၏ ပုံများကို မကြာခဏ ပေးပို့ပါမည်။ ဟုတ်ပါတယ် - စောစောကပြောခဲ့သလိုပဲ Telegram ဟာ ကုန်သွယ်မှုအသိုင်းအဝိုင်းကို ဖန်တီးရာမှာ အလွန်ကောင်းမွန်ပါတယ်။ သင်လုပ်ရန်သာလိုအပ်သည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့တွင်ပါဝင်ပြီး ကုန်သွယ်မှုအဖွဲ့ဝင် 20,000 နီးပါးနှင့် စျေးကွက်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုများကို သင်ဆွေးနွေးခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ မမှားပါစေနှင့် - ကုန်သွယ်မှုပုံစံအားလုံးသည်အန္တရာယ်တစ်ခုနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ သင်သည်ရိုးရာအစုရှယ်ယာများကို ၀ ယ်သည်ဖြစ်စေ၊ ငွေချေးသည်ဖြစ်စေဝယ်သည်ဖြစ်စေ၊ Forex အတွဲများရောင်းသည်ဖြစ်စေ၊ ၎င်းသည် cryptocurrencies ကိုဝယ်ယူခြင်းနှင့်ရောင်းဝယ်ခြင်းနှင့်မတူပါ။ စျေးကွက်အပြောင်းအလဲမမှန်ကန်ခြင်းသည်ဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်စေလိမ့်မည်။
အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အမြဲတမ်းမှန်ကန်စွာမရရှိကြပါ။ သို့သော်အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်း 76% win win သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အချက်ပြအသိုင်းအဝိုင်းကိုကောင်းကောင်းအကျိုးပြုသည်။ ဤသို့ပြောခြင်းအားဖြင့်ဆုံးရှုံးမှုထက်ရောင်းဝယ်မှုပိုမိုရရှိခြင်းသည်သင့်အားရေရှည်အကျိုးအမြတ်ကိုအာမခံနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်ဟာစနစ်တကျစွန့်စားရမှုစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းဗျူဟာကိုလိုနေသေးတယ်။
အောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ Telegram crypto အချက်ပြများကိုသင်မည်သို့ရှောင်ရှားနိုင်သည်ကိုအခြေခံကျသည်။
Bankroll စီမံခန့်ခွဲမှုသည်ကုန်သွယ်ရေးကဏ္ in အားလုံးတွင်အသုံးပြုသောသီအိုရီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာအရင်းအနှီးကိုကြီးမားသောဆုံးရှုံးမှုများမှကာကွယ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုသာဆိုလိုသည်။ ၎င်းကိုပြုလုပ်ရန်အထိရောက်ဆုံးနှင့်အကျယ်ပြန့်ဆုံးအသုံးပြုသည့်နည်းလမ်းမှာရာထူးတစ်ခုပေါ်တွင်သင်လောင်းကြေးပမာဏကိုကန့်သတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုသင်၏လက်ရှိအကောင့်လက်ကျန်ငွေနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကရာခိုင်နှုန်းအရအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်ဆိုပါစို့။ သင်၏လောင်းကြေးကို ၁.၅% အထိသတ်မှတ်ရန်ဆုံးဖြတ်သည်။
အကယ်၍ သင်၏ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာအရင်းအနှီးသည်လက်ရှိတွင်ဒေါ်လာ ၄၀၀၀ ဖြစ်လျှင်၎င်းသည်ကုန်သွယ်မှုတစ်ခုတည်းအတွက်ဒေါ်လာ ၆၀ ထက် ပို၍ မစွန့်လွှတ်နိုင်ဟုဆိုလိုသည်။
ဒါပေမယ့်သေချာတာပေါ့ - သင်ကုန်သွယ်ချိန်ခွင်လျှာရဲ့တန်ဖိုးဟာသင်ပိတ်လိုက်တဲ့အနေအထားတခုစီအပေါ်တက်ပြီးကျသွားလိမ့်မယ်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ လတစ်လအကုန်တွင်သင့်ကုန်သွယ်မှုပမာဏကိုဒေါ်လာ ၅၀၀၀ အထိတိုးမြှင့်နိုင်သည်။
ထို့ကြောင့်သင်၏အများဆုံးရှယ်ယာသည်ဒေါ်လာ ၇၅ ဖြစ်သည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်၏ ၁.၅% ကန့်သတ်ချက်သည်သင်စတင်ခဲ့သောဒေါ်လာ ၄၀၀၀ နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သောယခုအခါဒေါ်လာ ၅၀၀၀ ကို အခြေခံ၍ ဖြစ်သည်။
တစ်ဖန်၊ သင်၏ကုန်သွယ်အကောင့်လက်ကျန်သည် ယခု $3,200 သာရှိသည်။
ဆိုလိုသည်မှာ သင်၏ ကနဦးလက်ကျန်ဒေါ်လာ 800 မှ $4,000 ကျဆင်းသွားသည်ဟု ဆိုလိုသည်။
သို့သော် 1.5% အမြင့်ဆုံးလောင်းကြေးကို အခြေခံ၍ $3,200 လက်ကျန်တွင် သင်စွန့်စားရမည့် အများဆုံးမှာ $48 ဖြစ်သည်။
သင်တွေ့မြင်ရသည့်အတိုင်း၊ ၎င်းသည် သင့်လက်ကျန်ဒေါ်လာ ၅၀၀၀ တွင်ရှိနေသော ပြီးခဲ့သောလတွင် သင်စွန့်စားနိုင်သည့် $75 ရှယ်ယာထက် များစွာနည်းပါသည်။
နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ Telegram crypto အချက်အလက်များနှင့် တွဲဖက်၍ စွန့်စားမှုစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းဗျူဟာကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင်သည်ရေရှည်တွင်ဂိမ်းတွင်ဆက်လက်ရှိနေရန်သေချာသည်။ အခြား၏အခြားအဆုံးတွင်၊ ဤသို့မလုပ်နိုင်ခြင်းသည်ကြီးမားသောဘဏ္largeာရေးဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။
ဆုလာဘ်အချိုး vs အန္တရာယ်
အစောပိုင်းကကျွန်ုပ်တို့အတိုချုပ်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့၏ Telegram crypto အချက်အလက်များအားလုံးသည်စွန့်စားရမှုနှင့်ဆုလာဘ်အချိုးအစားဖြင့်ပါလာသည်။ တစ်ဖန် ထပ်မံ၍ ဤသည်သည်ကျွန်ုပ်တို့ပစ်မှတ်ထားနေသည့်အကျိုးအမြတ်များနှင့်အတူတိကျသောကုန်သွယ်ရေးအချက်ပြမှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့အန္တာရာယ်ပြုရန်အသင့်ပြင်ဆင်ထားသည့်အများဆုံးပမာဏဖြစ်သည်။
အများအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စွန့်စားမှု / အကျိုးခံစားခွင့်အချိုးကို ၁း၃ ကိုရွေးချယ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်အမြတ်အစွန်း ၃% ရရှိရန်ရည်မှန်းထားသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆန့်ကျင်လျှင် ၁% တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်တို့၏ရပ်တည်မှုကိုပိတ်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Telegram crypto အချက်ပြချက်များနှင့်အတူပါ ၀ င်သော stop-loss နှင့် take-profit စျေးနှုန်းများတွင်ထင်ဟပ်လိမ့်မည်။
1:3စွန့်စားမှု / အကျိုးခံစားခွင့်အချိုးအစားဘယ်လိုပုံကိုဥပမာပြပါမယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုန်သွယ်မှုအချက်ပြမှုသည် 38.50 တွင် BTC/ETH တွင် ဝယ်ယူမှုတစ်ခုပြုလုပ်ရန် အကြံပြုထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုထားသော ဝင်ခွင့်စျေးနှုန်း၏ 1% သည် 0.38 ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ stop-loss အမိန့်ကို 38.12 တွင် သတ်မှတ်ထားပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြံပြု entry ကိုစျေးနှုန်း၏ 3% 1.15 ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, ငါတို့ယူအမြတ်အစွန်း 39.65 သတ်မှတ်ထားသည်။
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း BTC / ETH နှင့်မည်သို့ဖြစ်မည်ကိုအရေးမကြီးပါ စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှု - အဖြစ်နှစ်ခုအရာတစ်ခုမှဖြစ်ပျက်နိုင်ပါတယ်အဖြစ်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ Telegram crypto signal ကိုအောင်မြင်စွာသက်သေပြနိုင်ပြီဆိုလျှင်အတွဲက ၃၉.၆၅ ထိရောက်သောအခါကျွန်ုပ်တို့၏အမှာစာ ၃% အမြတ်နဲ့ပိတ်သွားမှာပါ။ သို့သော်စျေးကွက်များကကျွန်ုပ်တို့ကိုဆန့်ကျင်နေလျှင်၎င်းသည် ၄၈.၁၂ ထိရောက်သောအခါကျွန်ုပ်တို့၏ဆုံးရှုံးမှုကို ၁% အထိကန့်သတ်သည်။
အထက်ဖော်ပြပါကဏ္fromမှအမြတ်အစွန်း ၃% သည်နာရီအနည်းငယ်ထက်မကဆက်လက်ကစားနိုင်သည့်အမြတ်အစွန်းကြီးမားသည်။ နောက်ဆုံးတွင်သင့်ငွေကိုရိုးရာငွေစုဘဏ်စာရင်းထဲသို့ထည့်ခြင်းဖြင့်သင်အမြတ်များစွာရရန်နှစ်နှင့်နှစ်များစောင့်ဆိုင်းရပါမည်။
သို့သော်သတိပြုရမည်မှာသင်၏ကုန်သွယ်မှုအရင်းအနှီးသည်အနည်းငယ်သေးငယ်ပါကလစဉ်လုံလောက်သောအမြတ်အစွန်းရရန်သင်ကြိုးစားရလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်ဆိုပါစို့။ သင်အမြတ် ၃% ပြန်ပေးသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ crypto အချက်ပြတစ်ခုမှဒေါ်လာ ၅၀၀ သင်စွန့်စားခဲ့သည်ဆိုပါစို့။ ဤအရာသည်အလွန်သေးငယ်သောဘဏ္returnာရေးအမြတ်ကိုဒေါ်လာ ၁၅ ဒေါ်လာသာရရှိလိမ့်မည်။
ထို့ကြောင့် Learn2Trade signal အဖွဲ့ဝင် အများအပြားသည် ၎င်းတို့၏ ရာထူးများတွင် သြဇာအာဏာကို အသုံးချကြလိမ့်မည်။ သင်ရရှိနိုင်သည့် ပမာဏသည် သင်အကောင့်ဖွင့်သည့်ပွဲစားနှင့် သင့်နေထိုင်ရာနိုင်ငံအပေါ် မူတည်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် ဥရောပနှင့် သြစတြေးလျတွင် ကန့်သတ်ချက်အချို့ ရှိနေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ၊ အကယ်၍ သင်ရွေးချယ်ထားသော crypto trading site သည်သင်အားသြဇာသက်ရောက်စေခြင်းကို ၁း၁၀ ဆိုပါကဆိုလိုသည်မှာသင်၏အမြတ်သည် ၁၀ ဆတိုးခြင်းဖြစ်သည်။ အလှည့်အနေဖြင့်ဒေါ်လာ ၁၅ တန်အမြတ်အစွန်းသည်ဒေါ်လာ ၁၅၀ အမြောက်အများသို့ပြန်ဆိုလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Telegram Signal များကိုမည်သည့် Crypto Pair များဖုံးလွှမ်းသနည်း။
၂၀၂၁ သို့ပြောင်းရွှေ့သွားသောအခါယခုတွင်ထောင်နှင့်ချီသော cryptocurrencies ရှိခဲ့သည်။ အမှန်တကယ်ကုန်သွယ်ရေးအတွဲများအရဤနံပါတ်ကိုဂဏန်းနှစ်လုံးဖြင့်မြှောက်နိုင်သည်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးတစ်ခုစီကိုဒင်္ဂါးတစ်ပြားချင်းစီရောင်းဝယ်ဖောက်ကားလို့ရတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ Bitcoin သည် Ripple, Ethereum, Bitcoin Cash, EOS နှင့်အခြားထောင်ပေါင်းများစွာကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနိုင်သည်။ Cryptocurrencies များကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာကဲ့သို့သောငွေကြေးဆိုင်ရာငွေကြေးနှင့်လဲလှယ်နိုင်သည်။
ဒီနေရာမှာ Learn2Trade မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Telegram crypto အချက်အလက်များသည်ကွဲပြားတဲ့နေရာဌာနခွဲနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ fiat-to-crypto နဲ့ crypto cross-pairs ။
Crypto မှ Fiat: နာမတော်ကိုအမှီပြု။ အကြံပြုအဖြစ်, Fiat မှ crypto အတွဲတစ်ခုဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးနှင့်တ ဦး တည်း fiat ငွေကြေးဆံ့။ ဤအမျိုးအစားတွင်အများဆုံးကုန်သွယ်သောစုံတွဲသည် BTC / USD ဖြစ်သည်။ သင်က Bitcoin နှင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာတို့အကြားငွေလဲနှုန်းအပေါ်ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုကိုမြင်လိမ့်မည်။
Crypto Cross-Pairs- ဒီ crypto pair တစုံအမျိုးအစားယှဉ်ပြိုင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးနှစ်ခုပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာအားဖြင့် BTC / ETH နှင့် EOS / XRP သည် crypto Cross-အတွဲများဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်တွင်းကုန်သည်များအဖွဲ့သည် cryptocurrency စျေးကွက်များကိုနာရီနှင့်အမျှစကင်ဖတ်စစ်ဆေးရန်လိုအပ်သောကိရိယာများအားလုံးရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့သည်ကုန်သွယ်ရေးအခွင့်အလမ်းများကိုအမြဲတမ်းရှာဖွေနေသည်။ ထို့ကြောင့်သင်ရရှိသော Telegram crypto အချက်အလက်များသည်အလွန်ကွဲပြားခြားနားနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Telegram Crypto Signal များကိုလုပ်ဆောင်ခြင်း
ဤလမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်ကိုဖတ်ပြီးပါပြီ။ ယခုသင်ခန်းစာ ၂ သည်လေ့လာရေး2Trade Telegram crypto အချက်အလက်များမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုသင်အပြည့်အဝနားလည်ထားသင့်သည်။ bankroll စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်စွန့်စားမှုဆုလာဘ်အချိုးများကိုနားလည်ခြင်းစသည့်အန္တရာယ်များကိုရှောင်ရှားနိုင်သောနည်းဗျူဟာကိုထိထိရောက်ရောက်ဖြန့်ရန်သင့်တွင်ကိရိယာများလည်းရှိသင့်သည်။
ထို့ကြောင့် Telegram crypto signal ခရီး၏နောက်အဆင့်သည်သင့်လျော်သောကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့၊ ငါတို့အချက်ပြပေးသော ၀ င်ခွင့်နှင့်ထွက်ပေါက်အမိန့်ကိုသင်လိုချင်လျှင်အွန်လိုင်းပွဲစားကိုသုံးရန်လိုအပ်သည်။
သတင်းကောင်းမှာ အွန်လိုင်းနေရာများတွင် ရာနှင့်ချီသော crypto ကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်းများ ရာနှင့်ချီရှိနေပြီဖြစ်သည်။ သတင်းဆိုးမှာ ရွေးချယ်ထားသော နံပါတ်တစ်ခုသာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။
အောက်ဖော်ပြပါကဏ္များတွင် crypto trading broker ကိုရွေးချယ်ရာတွင်သင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အဓိကအချက်များအကြောင်းရှင်းပြထားသည်။ အကယ်၍ သင့်အားပလက်ဖောင်းတစ်ခုကိုသုတေသနလုပ်ရန်အချိန်မရှိပါကကျွန်ုပ်တို့၏ပြည့်စုံသောလမ်းညွှန်ကိုအကောင်းဆုံးဖတ်နိုင်သည် cryptocurrency ပွဲစား 2022 နှင့်ကျော်လွန်ပြီး။
Crypto အရောင်းအ ၀ ယ်ဆိုက်ကိုသတ်မှတ်ထားသလား။
သင်ဖြစ်နိုင်သည် cryptocurrency ကုန်သွယ်အာကာသနေဆဲခြေရင်းရှာဖွေနေသည်ကိုငါသိ၏။ ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြီးမားသော cryptocurrency လဲလှယ်သည့် hack များအကြောင်းမီဒီယာအစီရင်ခံစာကိုထပ်ခါထပ်ခါကြားရသည်။ ဒီကိစ္စမှာကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းပြproblemsနာများသို့တက်လိမ့်မည်ဟုစိုးရိမ်ပူပန်မှုအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းကြောင့်, ဒီလေ့လာသူကုန်သည်တွေအများကြီးစက်မှုလုပ်ငန်းများကပယ်ရှားနေကြသည်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
ဤအချက်ကို စိတ်ထဲတွင်ထားခြင်းဖြင့် သင်သည် ထိန်းညှိထားသော cryptocurrency ပွဲစားများကိုသာ အသုံးပြုရန် ကျွန်ုပ်တို့ အခိုင်အမာ အကြံပြုလိုပါသည်။ ၎င်းသည် ဂုဏ်သိက္ခာရှိသော လိုင်စင်အဖွဲ့၏ ပုံစံဖြင့် လာသင့်သည်။ CySEC ဒါမှမဟုတ် FCA. မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအဖွဲ့များမှ အကျိုးအမြတ်ရရှိရန်အတွက်၊ သင်သည် crypto အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သတိပြုသင့်သည်။ CFDs.
ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုကိုပိုင်ဆိုင်စရာမလိုပဲကျွန်ုပ်တို့၏ Telegram crypto အချက်အလက်များအပေါ်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ CFDs သည်အကြောင်းရင်းများစွာကြောင့်အမှန်တကယ်အကျိုးရှိသည်၊ အကြောင်းမှာသူတို့သည်သင့်အားတိုတောင်းစေပြီးသြဇာသက်ရောက်စေနိုင်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသော crypto CFD ပလက်ဖောင်းအများစုသည်သင့်အားကော်မရှင်မလိုဘဲကုန်သွယ်ခွင့်ပြုသည်။
အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်တွင်းကုန်သည်များအဖွဲ့သည်အမျိုးမျိုးသော crypto အချက်အလက်များပေးပို့လိမ့်မည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်သင်ရွေးချယ်ထားသည့်ပွဲစားသည် cryptocurrency trading market များကိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ရန်သေချာအောင်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
နောက်ဆုံးတွင်သင်သည်မတူညီသောပံ့ပိုးသူများစွာနှင့်အကောင့်များကိုမဖွင့်လိုပါ၊ ယင်းသည်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအိပ်မက်ဆိုးတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ အဲဒီအစား၊ အလွန်များပြားတဲ့ crypto အတွဲများကိုကမ်းလှမ်းတဲ့တစ်ခုတည်းသော၊ ထိန်းညှိထားတဲ့ပလက်ဖောင်းတစ်ခုနဲ့ကပ်တာအကောင်းဆုံးပါပဲ။
cryptocurrency ပွဲစားများနှင့်ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းအားလုံးသည်အမြတ်အစွန်းရရှိရန်စီးပွားရေး၌ရှိသည်။ သူတို့ဟာကုန်သွယ်ရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အခကြေးငွေများကောက်ခံခြင်းဖြင့်ထိုသို့ပြုကြသည်။ အချို့ကသင်ငွေသွင်းသောအခါသို့မဟုတ်ထုတ်ယူသောအခါ၊ ညပိုင်းငွေကြေးနှင့်မလှုပ်မရှားသောအခကြေးငွေများပါ ၀ င်သည်။
သို့သော်၊ သင်သတိပြုရန်အရေးကြီးဆုံးအခကြေးငွေမှာ ပျမ်းမျှအားဖြင့် ပွဲစားမှကောက်ခံသည့် ကုန်သွယ်မှုကော်မရှင်ဖြစ်သည်။ ပျံ့နှံ့. ယခင်သည် သင့်ရှယ်ယာနှင့် မြှောက်ထားသော ရာခိုင်နှုန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ Coinbase သည်ကုန်သွယ်မှုနှုန်း ၁.၅% ကောက်ခံသည်။ ၎င်းသည်ကြီးမားသည်။ တကယ်တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ Telegram crypto အချက်ပြမှုတွေကိုမပျောက်စေဘဲအမြတ်ပစ်မှတ်ကိုကော်မရှင်နှုန်းအတိုင်းလျော့ကျစေလိမ့်မယ်။ ငါတို့ခဏတာသတိထားမိသလိုပဲ၊ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာပုံမှန်အားဖြင့်ကော်မရှင်ကင်းမဲ့သည့်ပွဲစားများကိုသာအကြံပြုခဲ့သည်။
ထို့အပြင် crypto အတွဲအားလုံးသည်ပြန့်ပွားမှုတစ်ခုနှင့်အတူလာလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်သင်မြင်တွေ့ရသောဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်တွေ့ရသည့် ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းဈေးတို့၏ကွာခြားချက်ဖြစ်သည်။ စျေးနှုန်းနှစ်ခုအကြားကွာဟချက်မှာပွဲစားများသည်အမြတ်အစွန်းရရှိကြောင်းအာမခံသည်မှာစျေးကွက်အတွင်းမည်သို့ဖြစ်ပျက်နေသည်။
ထို့ကြောင့်ကော်မရှင်မှလွတ်ကင်းသောပွဲစားများအပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်တင်းကျပ်သောပြန့်ပွားမှုကိုပံ့ပိုးသောပလက်ဖောင်းများကိုလည်းအာရုံစိုက်သည်။ Telegram crypto အချက်ပြ၏သဘောသဘာဝကိုသင်စဉ်းစားသောအခါ၎င်းသည်အထူးအရေးကြီးသည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံမှန်အားဖြင့်ဒေသ၏အမြတ်အစွန်း ၃ ရာခိုင်နှုန်းကိုရွေးချယ်သည်၊ ၎င်းသည်မြင့်မားသောအခကြေးငွေများကောက်ခံသော cryptocurrency ပွဲစားနှင့်မသင့်တော်ပါ။
မိုဘိုင်းအရောင်းအ ၀ ယ်ကိုအထောက်အကူပြုသော cryptocurrency ပွဲစားကိုရွေးချယ်ခြင်း၏အရေးပါမှုကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့သတိပြုသင့်သည်။ စံပြကမ္ဘာတွင်ဤသည်သည်သင်၏သက်ဆိုင်ရာ operating system နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောမိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုပေါ်လာသင့်သည်။
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင်မိုဘိုင်းကုန်သွယ်မှုအက်ပလီကေးရှင်းကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင်သတိပေးချက်ဖြန့်ဝေပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Telegram crypto အချက်အလက်များအပေါ်အမြဲတမ်းလုပ်ဆောင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
ပြီးနောက်၊ သင်သည်အချက်ပြမှုကိုလက်ခံရရှိသည့်အချိန်ရောက်လိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းသင်၏ကိရိယာနှင့်သင်အဝေးတွင်ရှိနေသည်။ ဤကဲ့သို့သောအခြေအနေမျိုးရှိပါကသင်၏ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာအက်ပလီကေးရှင်းသည်သင်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိနေပါစေလိုအပ်သောအမှာစာများကိုသင့်အားခွင့်ပြုလိမ့်မည်
အခမဲ့ Crypto Signals ကြေးနန်း
အကယ်၍ သင်သည်အခမဲ့ Crypto အချက်အလက်များ Telegram အုပ်စုကိုရှာဖွေနေလျှင်သင်ခေတ္တရပ်တန့်ရန်လိုလိမ့်မည်။ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ အချက်ပြပေးသူသည်ငွေကြေးရောင်းဝယ်မှုစျေးကွက်ကိုနာရီနှင့်အမျှစကင်ဖတ်စစ်ဆေးလိမ့်မည်။ သူတို့သည်အဆင့်မြင့်ဇယားဖတ်ခြင်းကိရိယာများနှင့်နည်းပညာညွှန်းကိန်းများကိုအသုံးချရုံတင်မကဘဲနှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံများကိုလည်းဆွဲဆောင်နိုင်လိမ့်မည်။
ဤအရာကိုထည့်သွင်းစဉ်း စား၍ crypto signal provider သည်ပိုက်ဆံမတောင်းဘဲဤအရာအားလုံးကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်ဟုသင်ထင်ပါသလား။ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ စင်စစ်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Telegram အုပ်စုများကိုအခမဲ့ crypto အချက်အလက်များဖြင့်တွေ့ရလေ့ရှိပြီး၎င်းတို့သည်ကုန်သွယ်ရေးအကြံပြုချက်၏အချို့သောအစိတ်အပိုင်းများကိုဖုံးလွှမ်းလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ အခမဲ့ crypto အချက်ပြမှုများကို Telegram အဖွဲ့မှ သင့်အား ETH/USD တွင် ကြာရှည်အသုံးပြုရန်နှင့် $750.67 ဖြင့် stop-loss မှာယူမှုကို ဖန်တီးရန် သင့်အား ပြောပေမည်။ သို့သော်၊ သင့်တွင် အကြံပြုထားသော ဝင်ပေါက်စျေးနှုန်း၊ သို့မဟုတ် အမြတ်အစွန်းယူသော ပစ်မှတ်ဒေသသို့ ဝင်ရောက်ခွင့်မရှိသောကြောင့် ဤအချက်ပြမှုသည် တန်ဖိုးမရှိပေ။
ဤအချက်နှစ်ချက်ကိုရရှိရန် - သင်အခကြေးငွေပေးရပါမည်။
Telegram တွင် Crypto Signal များ - အစီအစဉ်များနှင့်စျေးနှုန်း
သင်၏ရေရှည်ဘဏ္goalsာရေးရည်မှန်းချက်များအတွက် Learn2Trade Telegram crypto signal ၀ န်ဆောင်မှုကပေးသောအသံကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါကယခုအရေးကြီးသောမက်ထရစ် - စျေးနှုန်းကိုကျွန်ုပ်တို့ဆွေးနွေးသွားမည်။
ရိုးရိုးလေးပြောရမယ်ဆိုရင်မင်းတို့စဉ်းစားရမယ့်အစီအစဉ်နှစ်ခုရှိပါတယ်။ အောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ crypto အချက်ပြအစီအစဉ်တစ်ခုစီသည်မည်သို့အသေးစိတ်အလုပ်လုပ်သည်ကိုရှင်းပြပါလိမ့်မည်။
Telegram မှတစ်ဆင့်အခမဲ့ Crypto Signals
crypto signal arena တွင်သံသယများစွာရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့နားလည်ပါသည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အားလုံးအတွက်အစီအစဉ်ကိုအခမဲ့ကမ်းလှမ်းခြင်းဖြစ်သည်။ အတိုချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်၊ ဒီဟာကသင့်ဆီမှာဘဏ္informationာရေးသတင်းအချက်အလက်မလိုအပ်ပါဘူး။ သင်ကအကောင့်တစ်ခုဖွင့်ပြီး Learn2Trade Telegram အဖွဲ့ထဲကိုဝင်ဖို့လိုတယ်။
ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်တစ်ပတ်လျှင်အချက်ပြ ၃ ချက်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ crypto signal service ကိုအပြည့်အဝအသုံးချရန်ဤအရာသည်မလုံလောက်သော်လည်း၎င်းသည်အနည်းဆုံးသင့်အားကျွန်ုပ်တို့အားစမ်းသပ်ရန်ခွင့်ပြုသည် ကျွန်ုပ်တို့ပုံမှန်အားဖြင့်စတင်အသုံးပြုသော crypto အရောင်းအဝယ်အမျိုးအစားများနှင့်မည်သည့်စွန့်စားမှု / ဆုလာဘ်မဟာဗျူဟာများကိုရွေးချယ်သည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
အရေးကြီးသည်မှာ Telegram app မှသင်ရရှိသောအပတ်စဉ်အချက်ပြ ၃ ချက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ premium အသင်းဝင်များမှရရှိသောအချက်အလက်များနှင့်တူသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည် ၀ င်ငွေစျေး၊ ရပ်တန့်မှုဆုံးရှုံးမှုနှင့်အမြတ်အစွန်းကဲ့သို့သောအချက်အလက်အားလုံးရရှိလိမ့်မည်။
သို့သော် - နှင့်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့ရှင်းပြသည့်အတိုင်း၊ Premium အစီအစဉ်သည်တစ်နေ့တာလုံးအချက်ပြမှုနည်းလမ်းများနှင့်များစွာသက်ဆိုင်ပါသည်။
Telegram မှတစ်ဆင့်ပရီမီယံ Crypto Signal များ
ကျွန်ုပ်တို့၏ပရီမီယံ crypto signal ဝန်ဆောင်မှုကိုစာရင်းသွင်းခြင်းအားဖြင့်ပျမ်းမျှအားဖြင့် Telegram မှတစ်ဆင့်တစ်နေ့လျှင်အကြံဥာဏ် ၅ ခုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ကဖြန့်ဝေသောကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်များကိုသင်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ ဤသည်များသောအားဖြင့်အချိန်ဇုန်များအားလုံးကိုဖုံးလွှမ်းနေသောကြောင့်မည်သည့်နေရာတွင်အခြေပြုသည်ဖြစ်စေသင်လွတ်သွားမည်မဟုတ်ပါ။
အမည်ဖော်ပြသည့်အတိုင်း ပရီမီယံအကောင့်သည် အခကြေးငွေဖြင့် လာပါသည်။ ထိုသို့ပြောခြင်းဖြင့်၊ ဝန်ဆောင်မှုနှင့် သမိုင်းဝင်ရလဒ်များနှင့် ဆက်စပ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ကောက်ခံသောစျေးနှုန်းများသည် အလွန်ကောင်းမွန်သောတန်ဖိုးကို ပေးဆောင်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် ယနေ့အချိန်အထိ ကျွန်ုပ်တို့ ကာကွယ်ထားသော 76% အနိုင်ရနှုန်းကို သင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့်အခါ အထူးသဖြင့် ဤကိစ္စရပ်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Telegram crypto signal service ၏ကမ်းလှမ်းမှုအမျိုးမျိုးကိုအောက်တွင်ကြည့်ပါ။
တစ်နှစ်အတွက် £215 (တစ်လလျှင် £17.92) – နှစ်စဉ် ကောက်ခံပါသည်။
အထက်ဖော်ပြပါအချက်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းဖြင့်ရေရှည်တွင်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူမနေရန်သေချာပါကသင်၌ရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းများစွာရှိသည်။ ပထမ ဦး စွာကျွန်ုပ်တို့၏အစီအစဉ်အားလုံးသည်ရက်ပေါင်း ၃၀ ငွေပြန်အမ်းမည့်အာမခံချက်ဖြင့်လာသည်။
ဆိုလိုသည်မှာသင်ရရှိသောဝန်ဆောင်မှုကိုသင်မကျေနပ်လျှင်ပြန်အမ်းငွေအပြည့်တောင်းခံနိုင်သည်။ Learn2ကုန်သွယ်ရေးကျေနပ်မှုနှုန်းသည်သမိုင်းအစဉ်အဆက်မြင့်မားနေသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်း ၀ င်အနည်းငယ်မျှသာဤအရာကိုအခွင့်ကောင်းယူခဲ့ဖူးသည်။
ငွေပြန်ပေးရန်အာမခံချက်အပြင်သင်ရွေးချယ်ထားသောအစီအစဉ်တွင်သင်သည်ဘယ်တော့မျှသော့ခတ်ထားခြင်းမရှိကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သတိပြုသင့်သည်။ ဥပမာလစဉ်အစီအစဉ်ကိုသင်ရွေးချယ်လျှင်၊ သင်အတွက်သော့ခတ်ထားသောအရှည်ဆုံးကာလသည်တစ်လဖြစ်သည်။
အလားတူစွာ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏နည်းနည်းရှည်သောအစီအစဉ်များကိုအသုံးချရန်သင်ဆုံးဖြတ်ပါကလစဉ်နှုန်းထားနိမ့်ကျခြင်းဖြင့်သင် ၀ င်ရောက်နိုင်သည့်အရှည်ကြာဆုံးသည် ၃ လမှ ၆ လအထိဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Crypto Signal Telegram Group သို့မည်သို့ဆက်သွယ်ရမည်နည်း
Telegram crypto အချက်အလက်များမှသင်ငွေရှာရန်သင်စိတ်အားထက်သန်ပါကယခုစတင်ရန်သင်ဘာလုပ်ရမည်ကိုရှင်းပြတော့မည်။
အဆင့် ၁ - Crypto ပွဲစားအကောင့်ကိုဖွင့်ပါ
သင်၏ပထမဆုံးခေါ်ဆိုမှုဆိပ်ကမ်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အချက်ပြမှုကိုအထောက်အကူပြုသော crypto trading site ကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာပွဲစားကိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အပြိုင်အဆိုင်အခကြေးငွေပေးသင့်သည်။
ဤအချက်တွင် လူကြိုက်အများဆုံး ပလပ်ဖောင်းအချို့မှာ Skilling နှင့် capital.com တို့ဖြစ်သည်။ ဤပွဲစားနှစ်ဦးစလုံးသည် ကော်မရှင်အခမဲ့ ကုန်သွယ်မှုကို ပေးဆောင်ပြီး ဒက်ဘစ်/ခရက်ဒစ်ကတ်များနှင့် အီး-ပိုက်ဆံအိတ်များကဲ့သို့သော နေ့စဉ်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Telegram crypto အချက်အလက်များကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီစတင်ရရှိရန်အတွက်သင်သည်မည်သည့်အစီအစဉ်နှင့်စတင်မည်ကို ဦး စွာဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်သည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အခမဲ့နှင့်ပရီမီယံအစီအစဉ်များအကြားရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်စတင်လိုသည့် အစီအစဉ်ကို ရွေးချယ်ပြီးနောက်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ Telegram အဖွဲ့သို့ ဝင်ရောက်ရန် ကိစ္စတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ သင့်ဖုန်းတွင် အက်ပ်ကို ထည့်သွင်းထားခြင်းမရှိသေးပါက ၎င်းကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ Google Play စ or အပ္ပလီကေးရှင်းစတိုး - အခမဲ့။
သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းပြီးသည်နှင့်သင်၏ Telegram app တွင်အသံသတိပေးချက်များဖွင့်ထားကြောင်းသေချာစေရန်မမေ့ပါနှင့်။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်၊ သင်ဟာကုန်သွယ်ရေးအခွင့်အလမ်းကိုဘယ်တော့မှလက်လွှတ်မခံရတော့ပါဘူး။
Crypto Signals ကြေးနန်းလမ်းညွှန် - စီရင်ချက်လား။
ဤလမ်းညွှန်ကိုအပြည့်အ ၀ ဖတ်ရှုခြင်းအားဖြင့်ယခု Telegram crypto အချက်အလက်များပေးသည့်အကျိုးကျေးဇူးများကိုသင်အပြည့်အဝနားလည်လာလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
၎င်းသည်ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးကို Semi-passive ပုံစံဖြင့်ကုန်သွယ်နိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်နည်းပညာဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုလေ့လာရန်လိုအပ်ခြင်းကိုရှောင်ရှားနိုင်ခြင်းရှိမရှိ - အချက်ပြမှုက cryptocurrency ကုန်သွယ်ရေးမြင်ကွင်းကိုလွယ်ကူစွာဝင်ရောက်ခွင့်ပြုသည်။
သင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်မှာ Learn2Trade Telegram အဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အချက်ပြအကြံပြုချက်များကိုရယူရန်သင့်တော်သောပွဲစားဖြစ်သည်။
Crypto signal Telegram အုပ်စုဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
နက်နက်နဲနဲစျေးကွက်သုတေသနအပေါ် အခြေခံ၍ Crypto အချက်ပြများသည်အရောင်းအ ၀ ယ်များကိုညွှန်ကြားသည့်ကုန်သွယ်ရေးအကြံပေးချက်များဖြစ်သည်။ ဤအချက်ပြမှုများကို Telegram မှတစ်ဆင့်လက်ခံခြင်းအားဖြင့်၊ အကြံပြုချက်ပို့သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သတိပေးချက်ပေါ်လာမည်။
Learn2Trade crypto signal service သည်မည်မျှကုန်ကျမည်နည်း။
အမြတ်အမြတ်များသည်တစ်လနှင့်တစ်လကွဲပြားလိမ့်မည်ဟုမဆိုနိုင်ပါ။ ထိုအရာများဖြင့်ပြောရလျှင်သမိုင်းကြောင်းအရ 76% win win rate ကိုခုခံကာကွယ်ခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ၁၀၀ လျှင်ကုန်သွယ်မှု ၇၆ ခုသည်အမြတ်အစွန်းရှိသည်ဟုဆိုလိုသည်။
သင့်ရဲ့အချက်ပြမှုတွေကို crypto အတွဲတွေကဘယ်လိုပစ်မှတ်ထားသလဲ။
အဓိကအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်စျေးနှုန်းသတ်မှတ်သည့်အဓိက cryptocurrencies ကိုအဓိကအာရုံစိုက်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဤစျေးကွက်များသည်ကုန်သွယ်မှုပမာဏ၏အများဆုံးငွေဖြစ်လွယ်မှုအဆင့်မှအကျိုးဖြစ်ထွန်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူကပြောသည်နှင့်အတူကျနော်တို့လျော့နည်းအရည် cryptocurrency အားလုံးအတွက်အပေါ်ကုန်သွယ်အခွင့်အလမ်းများကိုရှာအခြိနျမှနျမှလုပ်ပါ။
သင်၏ Telegram crypto အချက်အလက်များသည်မည်မျှအန္တရာယ်ရှိသနည်း။
သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Telegram crypto signal service ကိုအသုံးပြုသည်ဖြစ်စေ၊ မပြုလုပ်သည်ဖြစ်စေ၊ ကုန်သွယ်ရေးအားလုံးသည်စွန့်စားရမည့်အချက်တစ်ချက်ကိုသယ်ဆောင်သည်။ ဤသို့ပြောခြင်းဖြင့်ကုန်သွယ်မှုတစ်ခုတည်းတွင် ၁% ထက် ပို၍ မစွန့်စားပါ၊ ရေရှည်တွင်သင်၏ဘဏ်စာရင်းကိုအကာအကွယ်ပေးရန်အကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းကိုသေချာစေရန်ဖြစ်သည်။
ဖောက်သည်အသစ်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ပရီမီယံအစီအစဉ်ဝယ်ယူမှုအားလုံးအတွက်ရက်ပေါင်း ၃၀ ငွေပြန်အမ်းမည့်အာမခံချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းထားသည်။ မေးခွန်းများမရှိပါ။ ထို့အပြင်တစ်ပတ်လျှင်အကြံပြုချက် ၃ ခုပါ ၀ င်သည့်အခမဲ့ crypto signal ၀ န်ဆောင်မှုကိုလည်းပေးသည်။